Wednesday January 16, 2019 - 10:45:00 in Wararka by Super Admin
Warar soo baxay ayaa sheegaya in muwaadiniin u dhashay wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka ay kamid yihiin dadka ku dhintay weerarka ka socda dhismayaasha kuyaal xaafadda Westland ee bartamaha magaalada Nairobi.
Saraakiisha Ammaanka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in wali aan tira koob rasmi ah lagu sameyn khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka sababa laxiriira dagaal culus oo wali ka socda dhismaha.
Ciidamo caddaan ah oo gurmad ahaan usoo gaaray magaalada Nairobi ayaa ka qeyb qaadanaya dagaalka walina waa ku guuleysan la'yihiin in ay arrinta xakameeyaan.
Video-yo ay duubeen kaamirooyinka amniga ee lagu magacaabo CC TV ayaa muujinayay xoogga weerarka qaaday oo dhax dagaallamaya dhismayaasha dagaalku uu ka socdo.
Jabaqda rasaasta iyo dhawaqa qaraxyada ayaa saaka aroortii hore laga maqlayay xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, waa weerarkii ugu waqtiga dheeraa ee Xarakada Al Shabaab ka fuliso gudaha caasimadda Kenya, weerarkii Westgate ee dhacay sanaddii 2013 ayaa ahaa midkii ugu waqtiga dheeraa ee Kenya lakulanto.